देशभर संक्रमणदर नघट्दा जनस्वास्थ्यविद् र चिकित्सकहरूले दिये सरकारलाई निषेधाज्ञाबारे यस्तो सुझाव ! – GALAXY
देशभर संक्रमणदर नघट्दा जनस्वास्थ्यविद् र चिकित्सकहरूले दिये सरकारलाई निषेधाज्ञाबारे यस्तो सुझाव !
काठमाडौं । देशभर संक्रमणदर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमणदर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने आँकलन थालिएको छ । अहिले नेपालमा संक्रमणदर १९।३ प्रतिशत रहेको छ । संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा ओरोलो लाग्न सकेको छैन ।
संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने अनुमान गरिरहँदा जनस्वास्थ्यविद् र चिकित्सकहरूले भने बन्दाबन्दी नै नियन्त्रणको प्रमुख उपाय नभएको तर्क गर्न थालेका छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी नै गर्न नपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।